Amarobhothi amahle kakhulu emakethe | Hlobisa
Amarobhothi amahle kakhulu emakethe
UMaria Jose Roldan | | Gadgets
Izinga eliphakeme lokuphila emphakathini wanamuhla likwenza kube nzima ukuthola isikhathi samahhala sokwenza imisebenzi ehlukahlukene yasekhaya njengokupheka. Yingakho eminyakeni yamuva imishini edumile yasekhishini isibe semfashinini kakhulu. Lawa ngamadivayisi amangalisayo enza konke kusuka ekuncibilikeni kuya ekuxoveni noma ekuphekeni. Umphumela wokugcina wezitsha ezenziwe ngalawa marobhothi umnandi futhi ziyasebenza kakhulu futhi zisebenza kahle, ngakho-ke umuntu unesikhathi esithe xaxa sokwenza ezinye izinto.
Ngemuva kwalokho ngizokutshela ngamarobhothi asekhishini amahle kakhulu emakethe ukuze ukwazi ukukhetha oyithandayo kakhulu.
1 UMoulinex Cuisine Companion
2 I-Taurus MyCook Touch
3 UProficook MKM 1074
4 I-Thermomix TM5
UMoulinex Cuisine Companion
Kuyirobhothi lasekhishini eligqame ngokuklanywa kwalo nokuba nesitsha esikhulu samandla emakethe esinamalitha ama-4 nohhafu. Enye impumelelo enkulu yale modeli ukuthi inesivalo esisobala esikusiza ukulandela inqubo yokulungisa izitsha zakho ngaso sonke isikhathi. Ubhasikidi wenziwe ngensimbi engagqwali futhi kulula kakhulu ukuyihlanza. Mayelana namaphuzu amabi ale robhothi lasekhishini, kufanele kuqashelwe ukuthi inesikrini esincane kakhulu futhi ayinaso isesekeli sangaphandle sokubilisa ukudla. Intengo yale robhothi ye-Moulinex Cuisine Companion icishe ibe ngama-euro angama-700 ngakho ubudlelwano phakathi kwekhwalithi nentengo buhle kakhulu.
I-Taurus MyCook Touch
Kuyirobhothi lasekhishini elifanele ngokuphelele ukuthi umpheki u-Alberto Chicote ulincoma futhi alivume. Okuhle kakhulu ngaleli robhothi ukuthi yilona kuphela emakethe elingapheka ngohlelo lokungeniswa futhi libuye libe ne-touch screen esingamayintshi ayisikhombisa lapho ungabona kahle ukuthi ungazilungiselela kanjani izindlela zokupheka ezahlukahlukene. Le modeli inokuxhumeka kwe-Wi-fi okuhlanganisiwe okukuvumela ukuthi uxhume ku-database enenqwaba yezitsha nezindlela zokupheka zazo zonke izinhlobo. Ngokuphathelene nokubi, irobhothi lasekhishini elingaba yinkimbinkimbi uma kukhulunywa ngokulihlanza nangomthamo olinganiselwe wamalitha amabili. ITaurus MyCook Touch isemakethe ngentengo yama-euro angama-1000.
UProficook MKM 1074
Ngalesi processor yokudla ungenza konke kusuka ekuxubeni, kushunqe kuya ekuxoveni noma ekunqobeni. Ngalesi simodeli ungalungisa zonke izinhlobo zepasta noma izitsha zemifino, ngokushesha nangokushesha lungisa amasosi amaningi nama-purees bese uxova uhlanganise inhlama ofuna ukuyenza uphudingi owuthandayo. Inengilazi enomthamo wamalitha amabili nohhafu futhi inezinhlobo zonke zezesekeli zokubasa kanye nencwadi yokupheka yazo zonke izinhlobo Into enhle ngalolu hlobo lwerobhothi lasekhishini yintengo yalo ngoba ungayithenga ngama-euro angama-400 kuphela futhi ayinalutho lokufisa iThermomix edumile noma amanye amarobhothi asekhishini abiza kakhulu emakethe. Uma ufuna ukujabulela irobhothi elihle lasekhishini ngentengo ebabazekayo, unganqikazi ukuthola le robhothi elihle lasekhishini leProficook MKM 1074.
IThermomix ngokungangabazeki iyindlovukazi yawo wonke amarobhothi asekhishini emakethe. I-TM5 iyimodeli yakamuva yale robhothi emangalisayo enenkinga enkulu yentengo yayo ephezulu. Uma ufuna leli robhothi lasekhishini kuzofanele ukhokhe ama-euro angama-1.200, kepha konke okunye kuyizinzuzo futhi lokho kuyidivayisi ephelele kakhulu enesikrini sokuthinta esikhangayo, amandla amaningi futhi kulula kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa. Elinye iphuzu ngokumelene neThermomix ukuthi inezinombolo ezinhle zokupheka kepha azikwazi ukwabiwa noma zilandwe ngokungafani nalokho okwenzeka ngeMycook.
Namuhla kunezinhlobonhlobo zamamodeli emakethe ukuze ukwazi ukukhetha irobhothi lasekhishini olikhethayo nelifanelana kahle nezidingo zakho zangempela. Kuyiqiniso ukuthi ukujabulela umshini wasekhishini kufanele utshale imali enhle kodwa nokho kuyinto ebaluleke ngempela, ngoba uma ungumuntu ongenaso isikhathi esiningi samahhala usuku nosuku lapho upheka ngerobhothi lasekhishini uzokwazi ukulungisa izitsha ezingapheli ngendlela esheshayo nephumelelayo. Ngaphandle kokungabaza, kuwukutshalwa kwezimali okubalulekile esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside ongazisoli nakanjani futhi ongajabulela ngakho amakhulu ezitsha zazo zonke izinhlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Umhlobiso » Gadgets » Amarobhothi amahle kakhulu emakethe
Hlobisa indlu yakho ngama-Vinyls
Uma ufuna i-vinyl eshibhile ukuhlobisa ikhaya lakho. Ungaphuthelwa yileli qoqo elihle.
Ama-Vinyls amahle kakhulu
Susa isithombe sangemuva
IKhabhinethi yonyawo lombhede
Thola izindatshana zakamuva ngomhlobiso nasekhaya.